Xuska 7aadka Adeega-shacabka Oo Si Heer Sare Ah looga Xusay Magaalada Jigjiga - Cakaara News
Xuska 7aadka Adeega-shacabka Oo Si Heer Sare Ah looga Xusay Magaalada Jigjiga
Jigjiga(cakaaranews)Axad 2da, July 2017. Xuska sanadguurada 11aad ee 7aadka adeeg-bixinta ayaa maanta si meeqaam sare leh looga xusay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga iyadoo munsaasabadana uu soo agaasimay xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha DDSI islamarkaana ay kasooqaybgaleen masuuliyiinta golaha kabinetka deegaanka, agaasimayasha xafiisyada deegaanka iyo marti sharafkale.
Hadaba, munaasabadan ayaa waxaa khudbad muhiim ah kasoojeediyay Wasiirka Xafiiska Adeega Shacabka iyo Horumarinta Cududa Shaqaalaha DDSI mudane Axmed Maxamed Koore oo uguhorayn kahadlay marxaladihii kaladuwanaa ee uu soomaray deegaanku gaar ahaan dhanka cududa shaqaalaha deegaanka. wuxuun xusay wasiirku in cududa shaqaalaha ee deegaanku ay door muhiim ah kulee yihiin horumarka balaadhan ee deegaanka kahirgalaiy iyadoo sidookale ay doormuhiim ah kaqateen hirgalinta siyaasadaha shaqada iyo shaqalaha intaba. Wasiirka ayaa tilmaamay in laga bilaabo maanta ay lagama maarmaan tahay in cududa shaqaalaha deegaanku ay sii adkeeyaan adeegbixinta loohayo bulshada si loo xaqiijiyo kamidho dhalinta qorshayaasha u yaala deegaanka ee uu ugu horeeyo qorshaha kobaca iyo isbadalka dhaqaalaha wajigiisa 2aad si deegaanku uga mid noqdo wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay.
Sidookale,Wasiir-kuxigeenka Xafiiska Maamulka DDSI mudane Cabdiwali Xaaji Maxamed Dalmar oo isna kahadlay munaasabadan ayaa sheegay in cududa shaqaalaha deegaanku ay manta taagantahay meeshii ugu fiicnid islamarkaana fursad wayn ay u tahay shaqaalaha deeganka maadaama uu deegaanku hada kahor laha shaqaale noocan ah laakiin aan adeg hufan bulshada siinin islamarkaana ay hortaagnaayeen nabadgalyo xumo sida ururadii gabalkoodu dhacay ee UBB iyo Al-Itaxaad.
Sikastaba ha ahaatee, munaasabadan xuska 7aadka adeeg-bixinta oo ah mid heer qaran ah dhamaana laga xusay deegaanada dalka ayaa waxa halkudhag looga dhigay ''adeega shacabka oo anshax leh ayaan kuxaqiijinaynaa dib-ucurashadeena''.